सीमा व्यवस्थापन नहुँदाको पीडा- विचार - कान्तिपुर समाचार
दुवै ‘फ्रन्टियर’ मा सीमा व्यवस्थापन गर्दै दुवैतिरका जनताबीचको सम्बन्ध गाढा र सुढृढ बनाउनुपर्छ ।
चैत्र ३, २०७३ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
नेपाल–भारत सीमारेखाबाट नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीले कच्ची बाटो र कलभर्ट बनाएका थिए । भारतीय सीमा सुरक्षाबल/‘एसएसबी’ले अहिले आएर कलभर्ट बिगार्न थालेपछि नेपालीले प्रतिकार गरे । वादविवाद गर्ने नेपालीलाई एसएसबीले लखेट्ने क्रममा दुवैतर्फबाट झडप भयो ।
यस्तो विवाद र झडपमा गोली लागेर एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भयो । यसपछि सीमावर्ती क्षेत्रको गोलीकाण्ड घटनाको आगो नेपालको विभिन्न स्थानमा मात्रै होइन, नयाँदिल्लीसम्म पनि सल्कन पुगिसकेको छ । आखिर यस्तो घटना किन हुन पुग्यो ? कञ्चनपुर जिल्लाको सीमावर्ती पुनर्वास नगरपालिका वडा–८ मा नेपालीले कच्ची बाटो र कलभर्ट निर्माण कार्य गतहप्ता पुरा गरेका थिए । यो कलभर्टभन्दा २ सय मिटर उत्तर नेपालतर्फ आनन्द बजार पर्छ । बाटो र कलभर्ट बनाउन लागिएको कुरा नेपालका तर्फबाट भारतीय एसएसबीलाई जानकारी गराइएको थियो । तर फागुन २६ गते एसएसबीका २०–२५ जवान अचानक आएर गुगल नक्साअनुसार यो भारतीय भूमि पर्छ भन्दै निर्माण भइसकेको कलभर्ट माथिको इँटा उप्काउन थालेपछि नेपाली र भारतीय पक्षबीच विवाद भयो । नेपाली पक्षले परम्परादेखि यो सीमावर्ती क्षेत्र नेपालीको रहेको छ । कलभर्ट दक्षिणको २२ विगाह जमिन नेपालीले कमाइ गर्दै आएका छन् भन्ने जिकिर गर्‍यो । वादविवाद चर्कंदै गयो । ३०–३५ जना नेपाली जम्मा भएर हाम्रो भूमिमा बनेको कलभर्टको इँटा किन फालेको भन्दै आफ्नो भनाइ तीव्र पारे । एसएसबीले चाहिँ भारतको जमिनमा किन इँटा र कंक्रिट बिछ्याएको भन्दै नेपालीलाई खेदे । यसपछि सयौंको संख्यामा भारतीय जम्मा भए भने हजारौंको संख्यामा नेपालीको हुल बन्यो । अनि नेपालीले भारतीयलाई लखेट्दै कलभर्ट नजिक पुगेपछि दुवैतर्फबाट ढुंगामुढा भयो । यत्तिकैमा गोली चल्यो । गोली लागेर कलभर्टभन्दा ६०–७० मिटर उत्तर गोविन्द गौतम ढले र उनको प्राण गयो ।
प्रकाशित : चैत्र ३, २०७३ ०८:०२
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अनुमतिमा प्रकाशित पात्रोहरूमा २०७३ माघ १ देखि फागुन २१ सम्म वृहस्पति तुला राशिमा देखाइएको छ । तर मैले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर दृक्पद्धतिको भएकाले वृहस्पति २०७४ को भदौ २७ गतेमात्र तुला राशिमा प्रविष्ट हुन्छ । मैले प्रयोग गर्ने यो सफ्टवेयर वेद विद्याश्रम, वनकालीका गणित शिक्षक रघुनाथ ढुङ्गेलले बनाउनुभएको हो ।
भारतीय पात्रोहरूमा पनि तुलामा गुरु पुगेकै छैन । नेपालमा मात्र कसरी पुगेछ ? सूर्य सिद्धान्तका महाभाष्यकार महावीर जैनले ‘यथा दृक्तुल्यता ग्रहा.....’ भनेर स्पष्टाधिकारको १४ औं श्लोकमा उल्लेख गरेका छन् । बजारमा देखिएका पात्राहरू सूर्य सिद्धान्तअनुसार लेखिए पनि सूर्य सिद्धान्तमा आधारित होइनन् । किनकि सूर्य सिद्धान्तले दृक्पद्धति बाहेक अरु सबै गणनालाई अशुद्ध मानेको छ । यसर्थ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबाट स्वीकृत पात्राहरू अशुद्ध हुन् । त्यति मात्र होइन, भारतीय पात्राहरूमा यसपल्ट ज्येष्ठ महिना ३२ को थियो र श्रावण महिना ३१ को थियो । तर पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जेठ र साउन दुवै महिना ३२ का बनाइदियो । भारतमा सङ्क्रान्ति पढ्ने दिन र नेपालमा पढ्ने दिन अलग भए । नेपाल र भारतको समयदूरी १५ मिनेट तथा दिल्ली र काठमाडौंको समयदूरी १० मिनेट ४८ सेकेन्डमात्र फरक छ । यति मात्र समयदूरीमा यसरी १।१ दिनकै कसरी फरक पर्छ ?
शतपथ ब्राह्मणका अनुसार हस्ता नक्षत्रको पूर्वोत्तरमा देखिने एक चम्किलो तारा चित्रा हो । प्रत्येक चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन यो तारा चन्द्रमाका छेउमा देखिन्छ । अरु बेला पनि यो तारा पूर्व—दक्षिण कोणमा देख्न सकिन्छ । यसपल्ट फागुन १९ सम्म बिहान ४ देखि ६ बजेसम्म चित्राको मुनि वृहस्पति छर्लङ्ग देखिएको थियो । लगभग जून महिनाभर यो तारा हाम्रो शिर माथिबाट जान्छ । हस्ता नक्षत्रमा ४ वटा तारा छन् । चित्रा, स्वातीका १।१ र विशाखाका २ वटा तारा छन् । के पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका मानिस कहिल्यै ग्रहहरू हेर्दैनन् ?
संसारमा महिनाहरू ३२ का हुँदै हुँदैनन् । तर मुहूर्त चिन्तामणिले सङ्क्रान्ति प्रकरणको ४ र ५ श्लोकमा कर्क र मकर सङ्क्रान्तिबारे बेग्लै नियम राखिदिएकाले यसो भएको हो । सबै सङ्क्रान्तिमा आधा रातअघि सूर्य जुन राशिमा सङ्क्रमण हुन्छ, त्यही दिन सङ्क्रान्ति हुन्छ । तर आधा रातपछि सूर्य सङ्क्रमण भए भोलिपल्ट मात्र सङ्क्रान्ति हुन्छ । ज्योतिर्विज्ञानमा सूर्य उदय नभई दिनारम्भ हुँदैन । मानौं श्रावण सङ्क्रान्तिका दिन सूर्योदय बिहान ५।१९ मा छ, तर सूर्य सङ्क्रमण बिहान ५।१८ मा भए अघिल्लै दिन सङ्क्रान्ति हुन्छ । यसले गर्दा ३१ का ठाउँमा ३२ भयो । त्यस्तै मकर सङ्क्रान्तिमा चाहिँ घाम अस्ताएपछि सूर्य सङ्क्रमण भए भोलिपल्ट मात्र सङ्क्रान्ति हुन्छ, यसले गर्दा ३० को ठाउँमा २९ भएको हो । तर समितिले २ महिना ३२ र २ महिना २९ गर्दै आइरहेको छ ।
सामान्य गणितको नियम पनि थाहा नभएका मानिसलाई समितिमा लगेर सरकारले ज्योतिर्विज्ञानकै उपहास गरिरहेको छ भने अहिलेको विश्वमा कतै नचलेको आर्षपद्धति (ज्यादै पुरानो) चलाएर अवैज्ञानिक प्रथालाई कायम राखिरहेको छ । साथै राहु र केतु ग्रह (प्लानेट) होइनन् । ग्रहको पूजा गर्ने भनेर ठग्ने कार्यलाई पनि सरकारले दुरुत्साहन गर्नसकेको छैन । ज्योतिर्विज्ञानमा ग्रहको पूजा नै हुँदैन । औंठी वा रत्नधारण पनि हुँदैन । सरकारले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा गणित पढेका मानिस नियुक्त गर्नुपर्‍यो ।
– ज्योतिर्विद् रत्ननिधि रेग्मी शुक्राचार्य
 एकजुट भएर अघि बढौं
नेपालको संविधान अनुरुप स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य सुरु भएको छ । संघीय संरचना अनुसारका स्थानीय तह सोमबारदेखि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनु सकारात्मक छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले फागुन २७ गते नै स्थानीय तह कार्यान्वयनको घोषणा गरे पनि सार्वजनिक बिदाका कारण सोमबारदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । छ दशकअघि स्थापना गरिएका स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रूपान्तरित भएका छन् । स्थानीय तह पुन:संरचनापछि चार महानगरपालिका, १३ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ वटा नगरपालिका र ४ सय ८१ वटा गाउँपालिका कायम भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका गाविसविहीन बन्न पुगेको छ । काठमाडौंबाट १७ किलोमिटर पूर्वमा रहेको साँखु र त्यस वरपरका गाविस समेटेर शंखरापुर नगरपालिका कायम गरियो । काठमाडौं नजिकै भएर पनि ग्रामीण बस्ती भएकैले नगरपालिका घोषणा भएर पनि त्यहांँका नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पछि परेका छन् । साँखुस्थित बज्रयोगिनी क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिए पनि हालसम्म पुरा हुनसकेको छैन । मर्मत—सम्भारका लागि सडक वरपरका घरहरू भत्काइए पनि पुनर्निर्माणको कार्य हुन सकिरहेको छैन भने भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरहरू पुनर्निर्माणका लागि पीडितले दोस्रो किस्तासमेत पाउनसकेका छैनन् । सम्पदाहरू पुनर्निर्माण समेत हुनसकेको छैन । जसरी नगरपालिका घोषणा गराउन नागरिक समाज, स्थानीय राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर लागे । त्यसैगरी स्थानीय विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी राहतका लागि पनि एकजुट भएर लडाइँ लड्न आवश्यक छ ।
 चर्चित सुन्दरीहरूको सेवाभाव
समाज कल्याण मन्त्रालयदेखि सयौं राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूले सुधारका काम गर्दै आए पनि समाजमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । तथापि चर्चित कलाकारमार्फत उल्लेख्य योगदान पुग्नसक्ने कुरा पछिल्लो समय धुर्मुस—सुन्तलीको अग्रसरतामा भूकम्प पीडितका लागि गरिएको सहायता अविस्मरणीय बनेको बेला मंगलबारको कला र शैली पृष्ठमा ‘समाज सेवामा सुन्दरी’ शीर्षकको खबरले जनमानसमा अर्को आशा थपिदिएको छ । मोडलिङ, गायन र अभिनयमा ख्यातिप्राप्त युवतीहरू क्रमश: नीति शाह, रेखा शाह र श्वेता खड्काजस्ता कलाकारले आफ्नो अमूल्य समय, धनराशि समाज सेवामा अर्पित गर्न थालेसँगै यसले यत्रतत्र खुल्दुलीमात्र नथपी कलाकारहरूप्रति सद्भावसमेत बढाएको छ । मोडल नीति शाह एसिड आक्रमण पीडित संगीता मगरलाई जापानिज परिकार बनाएर आर्थिक सहायता दिन र स्नातक तहको अध्ययनसम्म आर्थिक सहयोग जुटाउने कार्यमा तल्लिन देखिएकी छन् भने नायिका श्वेता खड्का श्वेताश्री फाउन्डेसन खोलेर सिन्धुपाल्चोकको माझीगाउँका भूकम्प पीडितलाई भरपुर सहायता प्रदान गर्न जुटेकी छन् । उता तीन वर्षअघि रेखा शाह फाउन्डेसन खोलेर छात्रवृत्ति दिन सुरु गरेकी गायिका शाहले फउन्डेसनमार्फत काठमाडौंस्थित दुई विद्यालयका २० विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको र यस वर्ष ६० जनालाई सघाउने योजना बनाएको विषय उदाहरणीय छन् । ‘छोरी घरकी शिक्षिका हुन्’ भनी शाहले दिएको अनुपम अभिव्यक्ति पनि नारी उत्थानको निम्ति सहायक सिद्ध हुने देखिन्छ ।
 एकल आमाको व्यथा
कान्तिपुरमा प्रकाशित भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस पढ्दा करिब १५०० वर्ष अगाडिको एउटा लघुकथा भन्न मनलागेको छ । साउदी अरबमा रहेको एउटा सन्तसँग एउटा व्यक्तिले सेवा भावनाले प्रेरित भई सोधे, ‘कसको सेवा गर्न सकिन्छ ?’ सन्तको उत्तर थियो, ‘आफ्नी आमाको ।’ ‘त्यसपछि कसको ?’ फेरि जवाफ थियो, ‘आमाको ।’ तेस्रोपटक सोध्दा पुन: जवाफ थियो– आमाको र चौथोपटक सोध्दा त्यसपछि जवाफ थियो, बुबाको अर्थात स्वर्ण पदक, रजत पदक र कास्य पदक आमालाई र सान्त्वना पुरस्कार बुबालाई । आमा जसले ९ महिना पेटमा राखी जन्माएपछि आफ्नो सन्तानलाई जति माया गरी पालनपोषण गरेकी छिन्, उनलाई बुढेसकालमा उफ् नभनी सेवा गर्नुपर्छ । किनकि आमाको पैतलामुनि स्वर्ग छ ।
– हसिम अन्सारी
 एमाले–मधेसवादी सम्बन्ध
चैत २ गतेको कान्तिपुर दैनिकको पाठक स्तम्भमा गंगा भट्टराई पाण्डेयले लेखेको ‘एमाले कसरी मधेस विरोधी ?’ भन्ने प्रतिक्रिया पढेपछि उहाँलाई नै सोध्न मन लाग्यो, एमाले कसरी मधेस विरोधी होइन भनेर ? हुन त म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन र कसैको पक्षमा वकालत पनि गर्दिन । उहाँको प्रतिक्रियाको खण्डन गरेर मैले मधेसीको वकालत गरेको पनि होइन, तैपनि कहिलेकाहीं मुटु नै दुख्नेगरी कसैले कुनै पार्टीको समर्थन गरेको देख्दा केही कुतकुती लाग्दो रहेछ । एमाले र मधेसी दलको सम्बन्ध आज बिग्रिएको होइन, धेरै पहिलेदेखि नै बिग्रिएको हो । ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ उनले मधेसीवादी दलप्रति केही नरमपना देखाए पनि सफलता हासिल गर्न सकेनन् । गंगाजीले भनेजस्तो ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसमा सबैभन्दा धेरै बजेट ल्याएको कुरा पनि त्यो यथार्थमा लागु गर्नुभन्दा पनि सरकार टिकाउनका लागि थियो । तैपनि उनको सरकार टिक्न सकेन । अङ्गीकृतलाई राज्यको माथिल्लो तहमा लैजानुहुन्न भन्ने कुरामा एमालेको मात्रै विरोध थिएन । जसमा अरु पार्टीको पनि पूर्ण समर्थन थिएन । यस्ता धेरै तथ्यका आधारमा अन्य राजनीतिक पार्टीभन्दा एमाले मधेसी दलको तारो बनेको हो । जसलाई सुधार्न उसले गरेको मेची—महाकाली अभियानले सम्बन्ध झन् चिस्याइदिएको छ ।
पालुङटार ८, गोरखा
 दार्चुलाको विकासका लागि
कुनै पनि क्षेत्रको विकासका निम्ति पूर्वाधारको विकास गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो भने प्रचार—प्रसार हुनु अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो । दार्चुला जिल्लाको विभिन्न महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल, पौराणिक तीर्थस्थल एवं मठमन्दिर, दैविक विविधताका साथै विशिष्ट लोकसंस्कृति, जैविक विविधता, बहुमूल्य जडीबुटी आदिले गर्दा पर्यटन विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना छन् । त्यस्तै यो जिल्लामा कृषि र पशुपालनको पनि प्रचुर सम्भावना छ । यहाँका स्थानीय कच्चा पदार्थ अल्लो, निगालो, ऊन, पराल, रिठ्ठा, भटमास आदि उद्योगको माध्यमबाट ग्रामीण युवालाई आधुनिक र वैज्ञानिक तालिम, प्रशिक्षण गराई स्थानीय उत्पादनको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रका युवालाई पशुपालन क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरी गाईपालन, भैंसीपालन, बाख्रापालन, कुखुरापालन, बंगुरपालन, मौरीपालन, तरकारी तथा फलफूल खेती, दाल तथा तेलहन खेतीका साथै हालै स्थापना भएको अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र लागु भएको क्षेत्रका युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा पाइने विभिन्न वनस्पति र बहुमूल्य जडीबुटी सम्बन्धी जनचेतना दिनसकेमा र ग्रामीण क्षेत्रमा आउने धार्मिक तथा अन्य पर्यटकहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा उनीहरूको गाँस, बासको उचित प्रबन्ध मिलाउनसके पर्यटन विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना छन् । तर पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा पर्यटन विकास हुन सकिरहेको छैन । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट स्थानीय स्तरमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नसकेमा यो व्यवसाय जिल्लाकै आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार बन्नसक्ने हुँदा सरकारी, गैरसरकारी एवं स्थानीय स्तरबाट समेत यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।
– नरेन्द्रसिंह धामी
 नेपालको कुरामा असहमति
चैत २ गते ‘गडबडमा राजनीति’ भन्ने किशोर नेपालको लेखप्रति मेरो असहमति छ । लेखकले संविधान संशोधनप्रति प्राय: सबै दलको धारणालाई थोरबहुत आफ्नै तरिकाले परिभाषित गरेका छन् । अहिलेको संविधान जारी हुने बेला र भइसकेपछि तराईमा करिब ६ दर्जन नेपालीको ज्यान गयो । यो संविधान विदेशीकै निर्देशनमा जारी गरिएको हुनाले र नेताहरू जसरी हुन्छ, सत्तामा पुग्न लालायित भएकै हुन् । एउटा शकुनीकै कारण महाभारतको लडाइँ भयो भने त्यस्ता शकुनी कति छन्, हाम्रो मुलुकमा र कति होलान् दुर्योधनरूपी नेताहरू ? यो मुलुकमा कुनै नेताले केही काम गर्नु पर्दैन । कामै नगरी जनतालाई मिठा कुराले प्रभावित गर्नसक्ने नै राष्ट्रवादी हुनेरहेछ । यही संविधानले सीके राउत जन्माएको हो भने यो संविधान जति अघि बढ्दै जान्छ, त्यति विखण्डनकारीको जन्म नहोला र ? नेपालीलाई मधेसी र पहाडीका बीच विभाजन गराउने काम राष्ट्रघाती भन्नसक्ने लेखकले संघीयताकै कारण मुलुकमा हरेक छेत्र विभाजनको संघारमा पुगेको चाहिँ किन लेख्न नसक्ने ? गिरिजाप्रसाद कोइराला उधारो राष्ट्रपतिको लोभमा फँसेकै हुन् भने माधव नेपाल पनि आन्दोलन सफल भए प्रधानमन्त्री पाइने लोभमा फँसेकै हुन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओली र बाबुराम भट्टराईसमेत अनेक प्रलोभनमा पँmसेकै हुन् । हरेक जनको आवाज हाल एकै छ, मुलुकमा कुशासन भयो भन्ने । तराईमा विभेद भयो भनिरहँदा के अन्य भूभाग अछुतो होला र ? तर यसै पत्रिकाको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने कञ्चनपुरमा एसएसबीले हत्या गरिएका गोविन्द गौतमलाई सरकारले सहिद र क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्दा ६ वर्षअघि मोरङमा एसएसबीकै अधिकृतले हत्या गरेका वासुदेव साहको परिवारलाई किन उपेक्षा ?
दमक— १०, झापा
 उपेक्षित मधेस
नेपाली राजनीतिमा मधेसतर्फ हेराइ, बुझाइ र भनाइमा कालान्तरदेखि नै फरक छ । मधेसमा भारतको धर्म, संस्कृति, भेषभूषा तथा भाषामा समानता भएकैले काठमाडौंले जहिले पनि उपेक्षा गर्दै आएको छ । तर नेपाल–भारतको खुला सिमानामा सीमारक्षक भई मधेसवासी उभिएको देखिँदैन । मधेस केन्द्रित राजनीति दललाई शीर्ष दलहरूले जहिले पनि च्याँखे दाउमा राख्नै रुचाएको हुनाले मधेसी दल पूर्णरूपमा अस्तित्वमा आउन सकेनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगित गर्न मधेसी दलले दिएको ७ दिनको अल्टिमेटम टुंगिएको छ । मधेसी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लेलान् भनी हतार—हतारमा राप्रपालाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गरी फेरि मधेसी दललाई गिज्याउने काम गरिएको छ । ठूला दलमा राजनीतिक संकट देखिएका बेला मधेसी दललाई फकाउन पुग्छन्, मधेसी दलले उठाएका मागलाई जायज भन्नसमेत हच्किँदैनन् । तर संकटको कालो बादल सफा हुँदै जान्छ, फेरि मधेसी दललाई दबाउने, हेप्ने प्रवृत्तिको नयाँ खेल सुरु हुन्छ । यसरी कहिलेसम्म राजनीतिको खेलमा मधेसी दललाई प्रयोग गरी मधेसवासीलाई उपेक्षित गरिरहने ?
 नेपाली सिमाना विवाद
कञ्चनपुरको आनन्द बजार नजिकैको नेपाल—भारत सिमाना भारतीयले मिच्नबाट जोगाउन खोज्दा गोविन्द गौतम कलिलै उमेरमा सहिद भए । हुन त भारतीयहरूले यसअघि पनि मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न ठाउँमा सीमा मिच्ने, सीमा स्तम्भ हटाउने मात्र होइन, नेपालीलाई दुव्र्यवहारसमेत गर्दै आएका छन् । हाल आएर यस किसिमको जघन्य अपराध गर्न पछि परेनन् । सानो देश नेपाल र सोझासिधा नेपालीप्रति यस्तो हेपाइ कतिसम्म सहने हो ? सरकारले त केवल कूटनीतिक नोट दिएर यत्रो घटनालाई थामथुम पारिसके जस्तो छ ।
सरकारले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सिमाना स्पष्ट रूपमा अध्ययन गरी कसैले पनि मिच्न नपाउनेगरी कायम गरोस् । यसो गर्नसके कसैले पनि हामीलाई हेप्न सक्दैनथे ।
ग्वार्को, ललितपुर— १७
 चुनावी बिगुल संशोधनको पासो
सरकारमात्र अस्थिर हैन नेपालमा, सरकारले लिने रणनीति अस्थिर छ । नेपाली राजनीति ड्राइभर बिनाको मोटरजस्तो बनेको छ, कोही एकले आएर जता मोड्न खोज्यो, त्यतै मोडिने, तर गन्तव्यमा कहिल्यै नपुग्ने । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आआफ्नै दाबी छन् । यो गरे ठिक नत्र बेठिक भन्दै आम जनताबीच खैलाबैला हुन्छ, जनताबीच हल्ला पुराइन्छ, तर विडम्बना जनभावना के छ, जनता के चाहन्छन् भन्नेमा सरोकार देखिँदैन । तपाई—हाम्रो मत बोकी गएका प्रतिनिधि हाम्रो भावनाको मर्म नबुझी, जनचाहना सम्बोधन नगरी अरू कोहीको माग पूर्ति गर्न होस् वा पार्टीको माग भन्दै उचित—अनुचित ख्याल नगरी एकोहोरो लागिपरेको देखिन्छ । नेपाली राजनीति चेस खेलझैं भएको छ । राजा, मन्त्री, हात्ती, घोडा, उँट, पिउसा सबैको आफ्नो स्थान तोकिएको छ । तर चाल चल्दा अरू कसैको विवेकमा चलिन्छ । संविधान आउनुपूर्व संविधान ठूलो शक्तिले ल्याउन नदिएको भन्दै भाषण गर्नेेहरू संविधान आएको केही समय नबित्दै संशोधन चाहिन्छ, नत्र संविधान समावेशी हुने छैन भन्दै कुर्लिन्छन् ।
हरेक रात कुरा फेरिन्छ, हरेक रात चाल चालिन्छ, नयाँ रणनीति अवलम्बन गरिन्छ । आजभोलि फेरि चुनाव अत्यावश्क भन्दै बिगुल फुकेको देखिन्छ । चुनावबाट जनता त्यति धेरै आशावादी देखिन्नन्, किनकि जनताले जसलाई जिताए पनि एउटा गोटी उभ्याउँछन्, विवेकशील नेताको भेषमा जनतामाझ आएका नेता अन्ततोगत्वा कठपुतली प्रमाणित हुन्छन् । संशोधनको पासोमा झुन्ड्याउने दाउ त थियो नै, तर चुनावको ललिपप देखाएर नयाँ चाल चालिँदैछ । पुरानो संरचनामा चुनाव सम्भव छैन भन्दै नयाँ संरचनासहित केही फेरबदल हालसालै देखियो । मधेसवादी दल फेरि आन्दोलनमा भन्ने गाइँगुइँ सुनिन्छ । न्युन संख्याले बहुमत अझै दुई तिहाइभन्दा बढीलाई बन्देज लगाउने यो कस्तो व्यवस्था हो ?
– डा. सञ्जय गेलाल
 रेडक्रसमा रजाइँ
सन् १८५९ मा भएको इटाली, फ्रान्स र अष्ट्रिया बीचको युद्धका प्रत्यक्षदर्शी जँ हेनरी ड्युनाले अमानवीय दृश्य देखेपछि सन् १८६२ मा सल्फेरिनोको सम्झना नामक पुस्तक प्रकाशन गरी युद्धका पीडित सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीको परिकल्पना व्यक्त गरे, जसको फलस्वरुप सन् १८६३ मा घाइतेहरूको सहयोगका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समिति स्थापना गरियो । त्यसको १०० वर्षपछि सन् १९६३ मा हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ०१/०२१ मा तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रिन्सेप शाहको अध्यक्षतामा २१ सदस्यसहित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दर्ता गरेको देखिन्छ भने हाल आएर यो संस्था कमाइ खाने भाँडो देखियो । रेडक्रसप्रति आम व्यक्तिको बुझाइमा पनि घाम लाग्नुपर्ने देखिन्छ । ‘रेडक्रसमा रजाइँ’ शीर्षक समाचारमा १४ जिल्लाको भूकम्प पीडितको आर्थिक रकम दुरुपयोगको प्रसंग छ । बाँकी ६१ जिल्लामा गरिएको कार्यक्रमको त लेखाजोखा नै छैन होला । समाज कल्याणमा दर्ता नहुनु अर्काे गम्भीर प्रश्न त छँदैछ भने मानवीयताका भाषण र प्रवचन गर्ने व्यक्तिले नै यस्तो हर्कत देखाउँदा यसमा विश्वास गर्नेको हालत कस्तो होला ।
– विपिन गौतम
प्रकाशित : चैत्र ३, २०७३ ०७:५९